Soohdinta Ethiopia & Eritrea oo dhiillo colaadeed ka taagan tahay, kaddib weerarkii shalay. – Radio Daljir
Addis-baba, Mar 16 -Xadka kala qaybiya labada dal ee colka ah ee Ethiopia iyo Eretria ayaa waxaa laga dareemaya dhaqdhaqaaq ciidan kaddib weerar ay shalaytoole khamiistii ciidamada Ethiopia ku qaadeen aagag ay lahaayeen ciidanka Eritrea, sida ay sheegeen ilo dhinaca militariga iyo diblamaasiyadda ah.
Dowladda Ethiopia ayaa shalaytoole ku dhawaaqday in Militarigeedu ay weerareen saldhigyo ay lahaayeen mintidiin gabaad ka dhiganayey Eritrea ,waxana Ethiopia ay sheegtay in ay gudaha u gashay illaa 10 mayl dhulka Eritrea, si ay halkaasi uga sifayso kooxo mintidiin ah oo garab ka helayey Eritrea ,islamarkaana bartilmaameedsanayey muwaadiniinteeda.
? dowladda Eritrea waxa ay sii waddaa in ay weeraro ku soo qaado Ethiopia ,iyadoo adeegsanaysa kooxo ka wakiil, laakiin iska hor imaadkan uma dhigmo dagaal toos ah ? sidaasi waxaa khamiistii sheegay afhayeen u hadlay dowladda Ethiopia
Iskudhacaan hubaysan ee dhinaca xadka ayaa loo arkaa in uu soo dedejinkaro dagaal suuragal ah oo labada dal ku dhexmara xuduudka .
Dowladda Eritrea ayaa saaxiibo yar ku leh caalamka,halka dowladda Ethiopia ay leedahay diblamaasiyad xoogan .
Eretria oo ah dal go?doonsan ayaa lagu eedeeyey in ay gacansiisyo kooxda mayalka adag ee Al-shabab ee ka dagaalanta koonfurta Somalia, waxana lagu soo rogay xayiraad dhinaca hubka ah.
Reysalwasaaraha Ethiopia Meles Zenawi ayaa dhowaan kor u qaaday dagaalka afka ah ee uu ku hyey Eretria, waxana uu dalbaday in loo baahanyahay in la bedelo nidaamka Asmara, isagoo sidoo kale ku hanjabay dagaal ka dhan ah Eritrea.
Dalka Eritrea, oo uu hore u gumeysanjiray wadanka Talyaanigu ayaa waxaa la wareegtay Ethiopia sanadkii 1962-dii, waxana arrintaasi keentay dagaal ku dhifoo ka dhaqaaq ah oo socday tobanaan sano oo ay wadeen dadka reer Eretria.
Sanadihii sideetamaadkii ayaa Reysalwasaaraha dalka Ethiopia oo xilligaasi ahaa hogaamiye jabhadeed uu gaashaanbuursaday hogaamiyihii jabhadda Eritrea Isaias Afwerki, si loo rido keligii taliyihii Ethiopia, waxana kaddib ridikaankii nidaamkii Ethiopia uu dalka Eritrea noqday qaran madaxbanaan sanadkii 1993-dii.
Ethiopia iyo Eritrea ayaa sanadkii 1998 galay dagaal xadka ah oo ka dhashay sheegashada magaalada Badme, ,waxana dagaalkaasi oo 2 sano socday ku dhintay tobanaan kun oo ruux ,iyadoo magaaladaasi Badme aan xal rasmi ah laga gaadhin.